सन्तोष देउजालाई एक्का ’सी के भयो ? चितवन मेडिकल कलेजबाटै दिए सबैलाई यस्तो जानकारी – Ap Nepal
सन्तोष देउजालाई एक्का ’सी के भयो ? चितवन मेडिकल कलेजबाटै दिए सबैलाई यस्तो जानकारी
काठमाडौ,पत्रकार तथा युट्युवर सन्तोष देउजा मृगौलामा समस्या का कारण हस्पिटल भर्ना भएका छन। उनि यो भन्दा पहिले पनि यसै रोग बाट बिरामी परि अस्पताल भर्ना भएका थिए।
चितवनमा रहेको चितवन मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका सन्तोष देउजाले आफु सल्यक्रियाको लागि भर्ना भएको र छिट्टै सन्चो भएर आउने बताएका छन्।
हेर्नुहोस उनले फेसबुकमा यस्तो सेयर गरेका थिए :
अन्ततः रोगसंग मेरो केहि लागेन। शल्यक्रियाका लागी चितवन स्थित CMC(चितवन मेडिकल कलेज) मा भर्ना भएको छु। आत्मबल उच्च छ। म चाडै उठ्नेछु। किनकी हजुरहरुको माया र आर्शिवाद मसंग छ।
काठमाडौं। नेकपा एमालेको पुरानै कमिटी सक्रिय भएको छ । आजबाट महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेजीको निर्णय भएसँगै पुरानो कमिटी सक्रिय भएको हो । नवौं महाधिवेशनको निर्वाचित कमिटी ब्युँताइसकिएको छ । निर्वाचित कमिटीमा ८ जना स्थायी कमिटी सदस्य थपिएका छन् । जसमध्ये माधव नेपाल समूहका वेदुराम भुसाल र रघुजी पन्त पनि हुन् ।
भुसाल र पन्त माधव नेपालका विश्वासपात्र हुन् । नवौं महाधिवेशनमा पन्त उपमहासचिवमा र भुसाल सचिवमा पराजित भएका थिए ।नेपालका विश्वासपात्रलाई स्थायी कमिटीमा ल्याउँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू पक्षधर रघुवीर महासेठ र विष्णु रिमाललाई पनि ल्याएका छन् । नवौं महाधिवेशनमा महासेठ र रिमाल दुवैजना सचिव पदमा पराजित भएका थिए ।
ओलीले नेपाल खेमाका समेतलाई स्थायी कमिटीमा मनोनित गरेर एकताका लागि दबाब बढाएका छन् । छुट्टै दल खोल्न ठिक्क परेका माधव नेपाललाई यो निर्णयले नैतिक संकटमा पारेको छ । अब उनले कस्तो कदम चाल्ने हुन् चासोको विषय बनेको छ ।
रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र मणि थापा पनि स्थायी कमिटी सदस्य बनाइएका छन् । उनीहरु पूर्वमाओवादी हुन् । पूर्वमाओवादीलाई स्थायी कमिटीमा ल्याएपछि माधव नेपाल खेमाले असन्तुष्टि जनाएको बुझिएको छ ।
Prevकोरोना भाइरस संक्रमित संख्या फेरि बढे, यस्तो छ पछिल्लो अपडेट।
Nextमोसम अपडेटः देशैभर तीन दिन यी स्थाहरूमा भारी व’र्षाको स’म्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह
Breaking: नेपालमा आज मंगलवार अहिलेसम्मकै धेरै कोरोना संक्रमित , ५५ जनाको नि’धन
९ बर्षिय सचिन परियार र रबिना बसेलले तोडे सबै रेकर्ड, लोक गीतको इतिहासमै २४ घण्टा नबित्दै ३ नम्बर ट्रेन्डिʼङमा (भिडियो हेʼर्नुहोस)
टिक-टकमा भा’इरल गन्धर्व जोडी भेट्दा निकै रमाइलो, भन्छन् हाम्रो जोडी दही जमेजस्तै जमेछ (भिडि,यो हेर्नुस्)
झाक्रीले १२ बजे राति चि, हानबाट कङ्काल निकाल्ना साथ् अचानक गाउले देखि किन रि,साए झाʼक्री ? दिए चेʼ तावनी (भिडियो सहित)